तपाईको फेसबुक अकाउन्ट कति वटा छ ? सावधान ! हेर्नुस् धेरै अकाउन्ट हुदा के हुन्छ « Sajha Page
तपाईको फेसबुक अकाउन्ट कति वटा छ ? सावधान ! हेर्नुस् धेरै अकाउन्ट हुदा के हुन्छ
सामाजिक सञ्जालमा खोलिएका एकाउन्टको संख्याले मात्र नभएर सामाजिक सञ्जालमा बिताउने समयले पनि व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्यलाई असर गर्ने पि्रम्याक बताउछन् । युनिभर्सिटी अफ पिट्सबर्ग स्कुल अफ मेडिसिनले गरेको अर्को एक अध्ययनले युवाहरु जति धेरै समय सामाजिक सञ्जालमा बिताउँछन्, त्यति नै बढि दुखि हुने देखाएको छ । अध्ययनका क्रममा सहभागीहरुले प्रत्येक दिन औसत ६१ मिनेट र हप्तामा ३० पटक विभिन्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको थियो । उनीहरुमध्ये एक चौथाईलाई डिप्रेसनको लक्षण देखिएको अध्ययनमा बताइएको छ । एजेन्सीको सहयोगमा